थारूकाे घरमा लुटपाट गर्ने डिएसपी विश्वराज खड्कालाई न्यायको कठ्घरामा उभ्याउनुपर्ने लक्ष्मण थारु - RanaTharu
थारूकाे घरमा लुटपाट गर्ने डिएसपी विश्वराज खड्कालाई न्यायको कठ्घरामा उभ्याउनुपर्ने लक्ष्मण थारु
धनगढी, १८ माघ ।
थरुहट नेता लक्ष्मण थारुले टीकापुर घटनाको क्रममा थारुहरुको घरमा छानी–छानी लुटपाट र आगजनि गराउनमा कैलालीका तत्कालीन प्रहरी नायव उपरिक्षक (डिएसपी) विश्वराज खड्काको हात रहेको आरोप लगाएका छन् ।
थरुहट/थारुवान मोर्चा कैलालीले शनिबार धनगढीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले डिएसपी खड्कालाई न्यायको कठ्घरामा समेत उभ्याउनुपर्ने माग राखे ।
‘थारुहरुको घरमा छानी–छानी आगो लगाइयो । छानी–छानी पसलमा आगजनी गरियो । तोडफोड गरियो । डकैट गरियो । ती चोर, चण्डाल, अपराधीहरुलाई बोक्ने त्यो तत्कालीन डिएसपी विश्वराज खड्का कहाँ छन् ? चाहियो न्यायको कठ्घरामा’, जांगिदै नेता थारुले भने–‘डिएसपी विश्वराजले गुण्डा लिएर थारुहरुको घर जलाएको होइन ? गुण्डा बोकेर थारुको घरमा चोरी गरेको होइन ? गुण्डा बोकेर एफएममा आगो लगाएको होइन ? थारुहरुलाई आतंकारी देख्ने, अपराधी देख्ने ? चोर देख्ने ? हाम्रै घरमा आगो लाग्ने, चोरी हुने, अनि हामीले नै झुठ्ठा मुद्धा खेप्नु पर्ने ? डाँका चोरीको, ज्यानमाराको, आगजनिको मुुद्धा खेप्नुपर्ने ?’
मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक समेत रहेका थारुले शान्ति र सद्भावको लागि फागुन १ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेको समेत बताए । उनले भने–‘अब हामी अलिकति पनि बिचलित नभएर, देशको शान्ति र सद्भाव नबिगार्ने गरी हामी आन्दोलनको घोषणा गरेका छौ । फागनु १ गतेदेखि मेरै नेतृत्वमा धनगढी अमरअनसनमा बस्दैछौ । २ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा प्रदर्शन गछौ । यदि त्यतिले भएन भने हामी फागुन ५ गतेदेखि ३ दिन आमहड्तालको घोषणा गर्दैछौ ।
यसैबीच खसान राष्ट्रिय संघर्ष समितिका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एंव सुदूरपश्चिम अध्यक्ष रघुवीर ठगुन्नाले राज्य पुनःसंरचनाको क्रममा खसहरुलाई अन्यायमा पारेको दुखेसो सुनाए ।
‘शासकहरुले हामीलाई, लक्ष्मण थारु जातिवादी भन्छन् । जातिय आन्दोलन गरेको भन्छन् । तर जातियता त सत्तामा बस्नेले एकल जातिय शासन चलाइरहेका छन् । हामी त शोषित वर्ग आफ्नो अधिकार र भाग मात्रै खोजेका हौ’, उनले अगाडी थपे ।
आफुहरुलाई खसआर्य भनी एउटैमा राखेपछि अन्यायमा परेको बताउँदै उनले थरुहट आन्दोलनप्रति एक्येवद्धता जनाएको उल्लेख गरे ।
मोर्चाले १४ बुुँदे माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । माघ ८ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको मोर्चाले आफ्नो पहिलो माग अन्तरगत सांसद रेशम चौधरीलगायतलाई जेलबन्दीको रिहाईको माग राखेको छ । भने टीकापुर घटनावारे सत्यतथ्य छानविन गर्नको लागि पूर्व न्यायधिश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको न्यायिक समिति, गृह मन्त्रालयद्वारा अनुसन्धानका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा गठिन छानविन समितिको प्रतिवेदन र सार्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । आफुहरुलाई सूचनाको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको भन्दै सयोजक थारुले प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग राखे ।
आन्दोलन पश्चात भदौ ८ गते कफ्र्यु तथा निषेधाज्ञाको क्रममा थारुहरुको घर, पसल तथा व्यावसायिक केन्द्रहरुमो गरिएको आगजनि, लुटपाट तथा चोरीमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरी कानूनी कारवाहीको माग गरेको छ ।
मौजुदा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश आफुहरुलाई अमान्य रहेको बताउँदै मोर्चाले पहिचानको आधारमा १० जोड १ कायम गरी राज्यको पुनःसंरचना गरिनुपर्ने माग सारेको छ ।